Kor Meerka Mashaariicaha Horumarineed ee Gobolka Nogob. - Cakaara News
Kor Meerka Mashaariicaha Horumarineed ee Gobolka Nogob.
Qubi(CN) Arbaca, 6da January, 2016, Waxaa ka anbabaxay magaalada fiiq ee gobolka nogob Wafti uu hogaminhayo gudoomiyaha Gobolka Nogob mudane Axmed Xaji Aadan oo kor meer shaqo ku gaadhay qaarka mid ah degmooyinka gobolka nogob. oo ay ka mid yihiin degmada qubi iyo mayamuluqo ee Gobolka Nogob.
Waftigan ayaa intii ay sii socdeen jidka u dhexeeya fiiq iyo qubi u sii kuur galay heerka ay marayaan hirgalinta mashaariicaha horumarineed iyaga oo tuulooyinka ay sii mareena kulamo kula yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan iskana xogwaraystay sidii loo dar dargalin lahaa mashaariicaha horumarineed ee wax ka qabanaya nolosha bulshada korna loogu qaadayo koboca dhaqaalaha.
Waftigan ayaa markii ay gaadheen degmada qubi ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada qubi. Waxayna gudoomiyaha iyo masuuliyiintan ku wehilinaysaa kulamo la yeelan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada qubi.
waftigan oo diirada saaraya dar dargalinta mashaariicaha horumarineed ee ka socda gobolka gaar ahaan kuwa biyo xidheenada ayaa waxa la filayaa in ay uga anbabaxaan degmada qubi ee ay hadda ku sigan yihiin degmada mayamuluqo ee Gobolka nogob.